EURO 2016: Xulka Wales oo xaaqay Belgium, una gudbay afar dhammaadka tartanka + Sawirro – Gool FM
EURO 2016: Xulka Wales oo xaaqay Belgium, una gudbay afar dhammaadka tartanka + Sawirro
(Paris) 02 Luuliyo 2016 – Xulka qaranka Wales ayaa iska xaadiriyey afar dhammaadka tartanka Euro 2016, kaddib markii ay 3-1 ku xaqeen dhigooda Belgium.
Radja Nainggolan ayaa hoggaanka u dhiibay xulkiisa Belgium, markii uu kubbad gantaal oo kale oo uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa 13’daqiiqo ka dhaliyey Wales, goolkaas oo ka mid ah kuwa ugu qurxan tartankan Euro 2016, iyadoo goolkaas uu caawintiisa lahaa Hazard.
Xulka Wales ayaa iska diiday sheekadaas, waxaana ay la yimaadeen goolka barbarka inta aan la aadin qeybta nasashada, markii kabtan Ashley Williams uu 31’daqiiqo madax qurux badan ugu shubay kaddib karoos gees laad ka yimid oo uu soo qaaday Aaron Ramsey.
Markaas kaddib labada xul ayaa bilaabay weerar iyo weerar celis iyo inay fursado abuuraan, laakiin ma suurto gelin inay goolal kale iska dhaliyaan, ciyaarta ayaana qeybta hore ku soo idlaatay barbaro 1-1.
Qeybtii labaad ee kulankan markii dib la isugu soo laabtay xulka Wales ayaa hoggaanka la wareegay waxaana gool uu saddex xiddig oo Belgium ah ku dhex qaatay ka dhaliyey 55′ daqiiqo Hal Robson-Kanu, kaaso ciyaarta ka dhigay 2-1 ay ku gacan sarreysay Wales.
Xulka Belgium ayaa isku dayey inuu goolkaas iska soo celiyo, dhowr weerarna ku qaaday goolka Wales, laakiin uma suurta galin inay dhaliyaan, waxaana dhammaadkii ciyaarta 86′ daqiiqo goolka saddexaad la yimid Wales waxaana madax kale u dhaliyey Sam Vokes, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-1 ay ku adkaadeen wiilasha Wales.
SAWIRRO: Karim Benzema oo gaaray sucuudiga si uu u cumraysto